DF oo jawaab ka bixisay hadalkii Maareeye | Warkii.com
Home warkii DF oo jawaab ka bixisay hadalkii Maareeye
Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cismaan Abuukar Dubbe ayaa ka jawaabay eedeymaha loo jeediyey madaxda dowladda federaalka ee ku aadan hanaanka ay u martay soo magacaabidda xubnaha guddiyada doorashooyinka dalka ku metelaya gobollada waqooyi ee Somaliland.
Wasiir Cisman Dubbe ayaa sheegay qof suuqa iska maraya markii horeba aan looga fadhin soo magacaabidda guddiyada, dalka iyo dadkuna ay leeyihiin dowlad masuul ka ah oo u xilsaaran arintan.
“Waxaa jira buuq badan, dadku xilka markii ay hayaan ma jecla in lagu buuqo, balse markii ay xilka waayaan aan laga joogi karin, maanta qolaa qeylineysa oo leh gobollada waqooyi gudiyadeedii doorashada waa la boobay, xilli doorasho kastana sidaas ayaa loo qeyliyaa,” ayuu yiri wasiirka cusub ee warfaafinta.
Waxa uu sheegay in hanaanka doorashooyinkan loo marayo soo doorashada kursiga xildhibaanka ay wax badan ka wanaagsantahay xilliyadii hore.
“Waxaan xasuustaa in doorashadii 2012-kii uu hal qof ayaa xildhibaanka soo xulayey, odagii meteli lahaa kursiga xildhibaankaasna waxa soo magacaabaneysay xukuumadii xiligaas jirtay, maanta kursiga xildhibaanka 101-qof ayaa u codeyneysa, yaa soo qoran kara intaas oo qof?”
“Waxaa filayaa in buuqa la kicinaayo uusan meesha ku jirin, tani waxayba noqoneysaa doorashadii ugu fiiceyd intii aan burburka kasoo kabanay,” ayuu yiri Cismaan Dubbe.
Sidoo kale waxa uu sheegay in siyaasiyiinta hadda qeylinaya ay horay u sawirteen iyagoo xilal haya oo guddiyo magacaabaya.
“Wixii ay sawirteen oo dhanbey waayeen, markaas ayey maalin kasta shir jaraa’id, qeylo iyo warqad soo saaris ku jiraan, marka wax aan ku sameyn karno ma jiraan ee waan iska dhageysaneynaa,” ayuu hadalkiisa ku sii daray.
Hadalka wasiir Dubbe ayaa imaanaya iyadoo wasiirkii uu xilka kala wareegay Maxamed Cabdi Xayir Maareeye uu maanta sheegay in guddiyada la magaacaabay xubnaha ku metelaya gobollada waqooyi aan hab sax ah loo marin, isla markaana aysan aqbali doonin.
Previous articleBeesha caalamka oo soo faro-gelisay dooda ka taagan guddiyada doorashooyinka
Next articleTigray-ga oo xalay weeraro culus ku qaaday magaalada ASMARA ee dalka Eritrea
Madaxweynaha maamulka Tigrayga, Debretsion Gebremichael ayaa markii u horeysay ku dhawaaqay inuu diyaar u yahay in wada-hadal laga furo xiisada dagaalka isku bedeshay ee...